फेरि अर्को अचम्म ! निर्मला हत्या छानविन समितिबाट राजीनामा दिएका केसी फर्किए काममा – Pahilo Page
फेरि अर्को अचम्म ! निर्मला हत्या छानविन समितिबाट राजीनामा दिएका केसी फर्किए काममा
२७ भाद्र २०७५, बुधबार १४:३० 383 पटक हेरिएको
काठमाडौं, २७ भदौ । चर्चित र रहस्यमयी बन्दै गएको कञ्चनपुरको निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याको अनुसन्धान गर्न गठित छानविन समितिबाट राजिनामा दिएका उपसचिव वीरेन्द्र केसी फेरि काममा फर्किएका छन् । बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी छानविन समितिको म्याद थप लगायतका विषयमा आफ्नो विमति रहेको र गृहमन्त्रालय तथा समितिका संयोजकसँग भएको छलफलबाट पुनः छानविनमा संलग्न हुँदा निर्मला पन्तप्रति न्याय हुने ठहर गरी काममा फर्किएको बताएका छन् ।
उपसचिव केसीले राजीनामा फिर्ता गर्दै पुनः अनुसन्धान समितिमा रहेर काम गर्ने भएका छन् । समितिले दोषी ठहर गर्न नसक्ने भएको भन्दै राजीनामा दिएका केसीले गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनबाट राजीनामा फिर्ता लिएको जानकारी दिएका हुन् ।
आफूले छोड्दा अपराधी छुट्ने सम्भावना रहने भन्दै उनले नाटकीय रुपमा पुनः समितिमै रहेर काम गर्ने जनाएका हुन् । गृह मन्त्रालयले घटनाको अनुसन्धान गर्न आइतबार मात्रै समितिको म्याद १५ दिन म्याद थप गरेको छ । म्याद थपिएसँगै केसीले समितिबाट राजीनामा दिएका थिए ।
यही भदौ ७ गते सरकारले घटनाको छानबिन गर्न कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सहसचिव हरि मैनालीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । बलात्कार र हत्या भएको ४७ दिन पूरा भइसक्दा पनि प्रहरीले दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन ।